Global Voices teny Malagasy » Bengladesh: Ny Dia Lavitra Natao Tamin’ny Fakanà Sary Niaraka Tamin’ny Bilaogera Fanta-daza GMB Akash · Global Voices teny Malagasy » Print
Bengladesh: Ny Dia Lavitra Natao Tamin'ny Fakanà Sary Niaraka Tamin'ny Bilaogera Fanta-daza GMB Akash
Voadika ny 25 Marsa 2012 6:12 GMT 1	 · Mpanoratra Rezwan Nandika Candy
Sokajy: Azia Atsimo, Bangladesh, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Saripika, Zon'olombelona
“Rivotra iainako ny fakàna sary. Tsy misy antom-pisiako raha tsy misy fakàna sary.” – Hoy i GMB Akash
Lasa tokoa mantsy ny fotoana nahitàna ny vaovao iraisam-pirenena avy ao Bengladesh feno fifangaroanà sary misy ny korontana politika sy ny loza voajanahary. Misaotra an'ireo tanora manan-talenta vao manomboka sy ireo izay efa matihanina amin'ny fakàna sary fa hahita sary an'arivony momba an'i Bengladesh ianareo ao amin'ny aterineto, indrindra indrindra ao amin'ny tranonkala mpanaparitaka sary toy ny Flickr  sy Picasa, izay mampiseho an'i Bengladesh amin'ny endriny maro hafa. Misy ihany koa mpamaham-bolongana an-tsary maro vao misondrotra avy ao Bangladesh izay manely ny sangan'asany sy ny sariny fanadihadiana.
Tiako hampahafantarina anareo ny asanà mpaka sary ary bilaogera iray izay tena nanaitra ny maro tokoa tamin'ny fampahafantarana an'i Bengladesh teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ny taona 1996 no nitsiry tao amin'i GMB Akash  ny fankafizana ny fakàna sary. Nanatrika ny World Press Photo seminar tao an-drenivohir'i Dhaka izy nandritra ny 3 taona ary nahazo ny mari-pahaizana tao Pathshala, izay Ivontoerana Momba ny Fakàna Sary Any Azia Atsimo ao Dhaka.
Nahazo loka iraisam-pirenena maherin'ny 40 isa avy amin'ny firenena maneran-tany izy ary ny asany dia nasongadina taminà vaovao iraisam-pirenena sy haino aman-jery mihoatran'ny 50 isa. Ao anatin'ny loka azony dia misy ny World Press Photo award (2006) ary ny International Travel photographer of the year award (2009). Vakio ny fanadihadiana ao amin'ny Tiffinbox  raha te hahalala bebe kokoa ny aminy ianao.
Manoratra ny mikasika ny sariny izy:
Ireto sary ireto dia tantaran'ny traikefa manokana azoko. Ny tenako dia mampiseho fohifohy ny manodidina ny fiainako. Ireny dia natao ireny dia mampifangaro ahy taminà karazanà toetra maro teo amin'ny fiainako. Indraindray aho mihazakazaka, indraindray aho mitaingina eo ambony tafon'ny lamasinina, matory eo amin'ny gorodona feno ny rano, milomano, mikiraviravy, mandany fotoana lava dia lava eny amin'ny faritra iva, ary ambonin'izany rehetra izany dia hitako ireo fanahy ireo. Lasa iray tamin'izy ireny mihitsy aza aho. Ireny zavatra niainana ireny dia nandry teo ambony loza avokoa. Kanefa rehefa avy nahita ireo olona ireo, rehefa niditra teo amin'ny varavarany ary rehefa noraisin'izy ireo ho namana aho dia hitako fa lasa mendrika ny asa rehetra vitako sy ny loza nandindona ahy. Hanohy ny diako aho, hikasika ny tava rehetra amin'ny fakan-tsariko. Hasehoko an'izao tontolo izao ireo sary misy tantaranà fijaliana izay tsy nisy nahalala. Na dia misy olon-tokana monja aza manome fialofana ho azy ireo dia efa voninahitra ho an'ny hatsembohako izany.
Fitaingenana tamin'ny lamasinina. © GMB Akash / www.gmb-akash.com
Anisan'ny asa mendrika nataony ny sarin'ny Hijras  (teraka ho lehilahy saingy manana ny mari-pamantarana ho toy ny vehivavy). Sasan-tsasany tamin'ny ampahany tao amin'nylahatsorany momba an'i Hijras :
Ny taona 1999 aho no nahatsapa fa tokony hifantoka kokoa amin'ny tantaran'ny olona mila fanampiana. Tamin'izany fahatsapàna izany, dia nisy tantara tao ambadika. Fony mbola zaza, dia nitsidika ny tranon'ny dadatoako tany Narayangonj aho, 25 kilometatra eo any avaratr'i Dhaka. Ny dadatoako dia nanana “hermaphrodite” antsoina any an-toerana hoe Hijra, “Khushi” no anarany – midika hoe fahasambarana, kanefa izany no tena tsy ampy indrindra taminy teo amin'ny fiainany.
Ny fiaianan'ny Hijra. © GMB Akash / www.gmb-akash.com
Mifangaro be ihany nyfandraisana azon'i Hjira avy tamin'ny olona maro; ny manana fari-piainana amin'ny antonony dia mihevitra fa ho ratsy ny ho avin'izy ireo, eny fa na dia ny fahitàna Hijra rehefa maraina ihany aza dia raisina ho mitovy ihany ary ninoana fa afaka ny hanimba ny andro manontolony. Izay misy ny kilasy ambany no misy azy ireo hany ka noeritreretina izy ireo fa manana ny tanjaka ara-panahy noho ny tsy fananany hafaliana amin'ny fiainana andavanandro, ny fivavak'izy ireo dia ninoana ho mahazo valiny.
Niara-nipetraka amin'ny iray tamin'ireo anabavy maro avy ao amin'ny Tangail brothel i GMB Akash. Rehefa nanadihady azy ireo izy dia nizara tantara mampalahelo ho an'izao tontolo izao izy ireo . Sary natolotr'i GMB Akash
Ny photoblog-ny dia feno tantara mampalahelo, fijaliana, hafaliana sy fanantenan'ny olon-tsotra ao Bengladesh. Ao amin'ny sary fanadihadiana “nateraka ny hiasa” dia milaza ny heviny momba ny raharaha fampiasàna ny zaza izy :
Nateraka ny hiasa. © GMB Akash / www.gmb-akash.com
Miasa manasaraka fasika sy vato i Shilu . Farafahakeliny olona miisa 10,000, izay ahitàna vehivavy miisa 2,500 ary ankizy maherin'ny 1,000, no miasa amin'ny fanangonana vato sy ny fasika avy ao amin'ny Bhollar Ghat eo amin'ny moron-dranon'i Piyain. Ireo akora fanaovana trano toy ny vato sy ny fasika, ary simenitra izay vita avy amin'ireo akora ireo ihany, dia tsy ampy velively ao Bengladesh, ary mitaky vidiny lafo dia lafo amin'ny mpandraharaha mpanao asa fanorenana. Raha aravona ny vola miditra dia manodidina ny 150 taka (latsaky ny 2 USD) ny iray andro. Jaflong, Sylhet
Raha ny resadresaka TEDx nataony tao Portugal tamin'ny TEDxO'Porto 2011 no jerena izay niresadresahany momba ny tetikasa lavitr'ezaka hataony, ny ‘Survivors’ manolotra fahafantarana lalina dia lalina momba ny dingana arahana sy ny faharisihana ao ambadiky ny asa tahàka itony. Survivors: “The invincibility of human determination to struggle and survive against all odds”  na “Ny faharisihan'ny olombelona hiezaka sy hanavotra ny ainy manoloana ny sàkana rehetra” dia boky avy ao amin'ny Galleria di Porta Pepice of the photographs nataon'i GMB Akash.
Azonao arahana i GMB Akash ao amin'ny Tranonkalany , bilaoginy , Facebook , Flickr  ary ny kaonty Twitter .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/03/25/30753/
 GMB Akash: http://www.gmb-akash.com/
 fanadihadiana ao amin'ny Tiffinbox: http://tiffinbox.org/an-interview-with-photojournalist-g-m-b-akash/
 lahatsorany momba an'i Hijras: http://gmbakash.wordpress.com/2012/02/12/the-creator-has-strangled-me-with-his-own-hands/
 milaza ny heviny momba ny raharaha fampiasàna ny zaza izy: http://gmbakash.wordpress.com/2011/05/28/born-to-work-3/
 Survivors: “The invincibility of human determination to struggle and survive against all odds”: http://issuu.com/galleriaportapepice/docs/survivors?mode=embed&viewMode=presentation&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&showFlipBtn=true